Umusa kaKristu ongunaphakade eMhlabeni | Lost Sheep for Christ
Umusa kaKristu ongunaphakade eMhlabeni
Angicabangi ukuthi ubani ongakwazi ngempela ukuqonda isihe sikaKristu esimangalisayo! Lapho uJesu ethumela uPetru kuMathewu Isahluko 16: 17-19, wathatha umdobi ongaphili. Indoda eyayinomndeni futhi eyashiya indlela yakhe yonke yokuphila ukuze ilandele uMesiya. Vumela lokho kungene kancane. UNkulunkulu, oMninimandla onke noNkulunkulu ohlala njalo wakhetha indoda elula, isicebi emehlweni ezwe, ukuhola iNhlangano Engenamandla Kunazo Zonke. “Izihluthulelo zombuso” kwakufanele zinikezwe ngezandla ezingcwele ezandleni zezono. Ngibona lokhu njengenye indlela kuGenesise 2: 7 “INkosi uNkulunkulu yasimisa umuntu ngomhlabathi ovela emhlabathini, yaphefumula emakhaleni akhe umoya wokuphila; futhi umuntu waba ngumphefumulo ophilayo “. Yebo, uPetru wayesesononi, njengalowo nalowo wabafundi bakaJesu, nokho, uNkulunkulu ngesipho sakhe esingapheli wakhetha ukuboshwa nomuntu ngokumkhombisa ukuthi uthanda kangakanani ukugcwaliseka kwesintu ukuba abe naye.
Isifiso soZiqu-zintathu Ongcwele singabonakala uma ugxila kwi-CCC 827 yekatekism. “Nokho, isonto lifakaza izoni esifubeni sakhe, ngaso leso sikhathi lingcwele futhi lihlale linesidingo sokuhlanzwa, lilandela njalo indlela yokubuyiselwa nokuvuselela.” UKristu wayazi ukuthi umuntu uzoba nezinkinga phakathi nokuphila kwakhe, kodwa wathembisa UPeter “Amasango esihogo ngeke asinqobe”. Singabambelela kulawo mazwi angcwele wegunya! UJesu akasoze avumela uSathane namademoni akhe ukuba babhubhise ibandla. Ngisho nalo lonke izwe elimelene neSonto LamaKhristu Ongcwele, uyokuma aqine kuze kube yilapho umkhwenyana ebuyela emhlabeni (IsAmbulo 21: 5) “Futhi ohlezi esihlalweni sobukhosi wathi,” Bheka, ngenza zonke izinto zibe zintsha ” ISonto lizoqhubeka likhanya emhlabeni, ibhondi yethemba!
USihlalo kaPetru uzoqhubeka futhi uqhubeke phakathi namakhulu eminyaka. Ukushushiswa kwamaRoma, ukuya ekuguqulweni kwamaProthestani kanye kokubili izimpi zomhlaba. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wanikeza wonke umuntu oyedwa oyilungu leSonto LamaKatolika Lona Ubumnene, uma bebhapathiziwe. Ngabe ungachaza kanjani ukuthi uJesu wakhetha kanjani amadoda nabesifazane phakathi kwamabandla ukuba babe abangcwele futhi baqhubeke nomsebenzi wakhe emhlabeni. Kusukela komkhulu kunabo bonke kuya kwabampofu kakhulu, abangcwele bethu bawubufakazi bendawo yonke kaKristu neBandla Lakhe. Abanye abazange benze izimangaliso ezinkulu ezifana nokuvusa abantu kwabafileyo noma ukudla iqembu elikhulu labantu. UNkulunkulu wanikeza izipho ezithile zomuntu akhethiweyo kanye nezibusiso ayefuna ukuba nazo, ukwandisa ukholo lwamakholwa. Ngikholwa ukuthi isimangaliso sesithathu esikhulu kunazo zonke emva kokusungulwa koMthendeleko Ongcwele nokuvuswa kwabafileyo, kwakuyisipho soMoya oNgcwele ukugqugquzela la madoda nabesifazane ukuba bafele ukholo. Ubani ozimisele ukufela amanga? Ubani ozimisele ukuhlupheka nokubekezelela isijeziso esikhulu emhlabeni nangokomoya, uma bengakholelwa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu ophilayo? Umphumela wokungcwelisa umusa ungamandla kaNkulunkulu uMoya oNgcwele, ngokuncenga kwe-Immaculate Conception ukusiza amadoda nabesifazane ukuba bathi yebo kuNkulunkulu, yebo ukwenza intando yakhe emhlabeni, yebo ukuthandazela uFrancis, uPapa wethu eRoma kanye nabo bonke abefundisi nabo bonke abafowethu nodadewethu esontweni jikelele. Ngamandla eRosari namasakramente eSonto, thina, ngomusa kaNkulunkulu wothando wonke, siyakwazi ukukhuthazela kuze kube sekupheleni kwezinsuku.
← Ukuzindla 10/28/18